Nei Iwo Mavara Confetti Mabhokisi Mune Ari Meseji App Pane yangu iPhone? - Iphone
apple yaona hutachiona
kosi dzekutarisira masikati nespanish
iphone yangu inoti hapana sim kadi yakaiswa
iphone yangu yakangoita nhema
Iwe unovhura meseji meseji uye kukanganiswa kwemabhokisi ane mavara anotanga kuwira kwese pamusoro pechiso. (Kana iwe usina kufunga 'Confetti!' Nguva yekutanga iwe kuzviona - hazvo, neniwo handina.) Mune ino chinyorwa, ini ndichatsanangura nei mavara mac confetti mabhokisi akaonekwa muMessage app pane yako iPhone uye sei kutumira iMessages ne confetti pane yako iPhone, iPad, kana iPod.
mudziyo uyu haugone kutsigirwa
Ndeapi Aya Makara Mabhokisi Mune Mamessage Pane Yangu iPhone?
Iwo ane mavara rectangle mabhokisi mune iwo Meseji app pane yako iPhone ari Confetti , imwe iMessage mhedzisiro mhedzisiro iyo Apple yakaburitswa ne iOS 10.
Nei Kune Confetti Mune Meseji App Pane yangu iPhone?
iOS 10, iyo nyowani software yekuvandudza Apple yakaburitswa neiyo iPhone 7, yaive nezvakawanda shanduko kuMessage app. Chimwe chezvakanyanya kukosha kugona kutumira iMessages nemhedzisiro. Kana iwe uri kuona Confetti, iwe uchangobva kugamuchira iMessage neiyo Confetti mhedzisiro.
Iwe uchaona zvakare Confetti kana mumwe munhu akati 'makorokoto' mune Messages app pane yako iPhone.
Ini Ndinotumira Sei Confetti Mune Iwo Meseji App Pane yangu iPhone?
Vhura iyo Messages app uye nyora yako meseji.
Dhinda uye ubatisise bhuruu tumira museve kusvikira iyo Tumira nechinangwa menyu inowanikwa.
Tinya Screen pasi Tumira nechinangwa pamusoro pechiso.
Shandisa munwe wako kutsvaira kubva kurudyi uchienda kuruboshwe kusvikira iwe waona iyo Confetti mhedzisiro ichioneka.
Tinya bhuruu kutumira museve kurudyi kwechinyorwa kutumira iMessage ine confetti.
Confetti Meseji: Hapana Kuchenesa Kunodiwa!
Iye zvino zvaunoziva kutumira mameseji ne confetti pane yako iPhone, iPad, uye iPod, meseji yaunotumira inogona kunge iri pati - uye haufanire kumbonhonga zvidimbu zvidiki zvepepa izvo zvichibva pasi. Zvakanaka, kunakidzwa kwakachena kubva kuApple. Inzwa wakasununguka kusiya mubvunzo kana kutaura pazasi, uye nekutenda nekuverenga!